आइतवारदेखि सातामा ५३ ओटा अन्तरराष्ट्रिय उडान हुने, कहाँ-कहाँ थपियो? - Nepal Samaj
आइतवारदेखि सातामा ५३ ओटा अन्तरराष्ट्रिय उडान हुने, कहाँ-कहाँ थपियो?
२६ असार, २०७८Nepal Samajमुख्य समाचारअन्तरराष्ट्रिय उडान, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
काठमाडौं, असार २६। सरकारले मुलुकको अन्तरराष्ट्रिय नियमित उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । हालै भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अन्तरराष्ट्रिय उडान संख्या थप गरी नयाँ तालिका नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पठाएको छ ।
क्यानका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीका अनुसार अब सातामा कुल ५३ वटा उडान सञ्चालन गर्नेगरी विभिन्न मुलुकका गन्तव्यमा उडान तालिका तय गरिएको छ । सरकारले अन्तरराष्ट्रिय उडानतर्फ उडान संख्या थप गर्दै यसअघि उडान खुला गरेका गन्तब्यमा भारतबाहेकका मुलुकमा हुने उडान संख्या थप गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइएको छ ।
नयाँ तालिकाअनुसार भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सातामा दुई उडान सम्बन्धित मुलुकका राष्ट्रिय ध्वजाबाहकले गर्नेछन् । नेपाल वायुसेवा निगमले बुधवार र एयर इण्डियाले सोमवार गर्नेछन् ।
यस्तै नेपाल एयरलाइन्सले यूएईको दुबईमा मंगलवार र बिहीवार तथा नेपालबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान भर्ने निजी क्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्सले आइतवार, मंगलवार र बिहीवार उडान गर्नेछन् । फ्लाइ दुबइले आइतवार, बुधवार र शुक्रवार एक÷एक ओटा उडान गर्नेछ ।
आईतबारदेखि आन्तरिकतर्फको हवाई उडान पूर्णरूपमा खुला